Izindaba - Ukukhuphuka okusheshayo kwe-PVC flooring noma kuzoshintsha iphethini ekhona yemboni yaphansi?
I-PVC isetshenziswa kabanzi ezimbonini eziningi ezisezansi, ezimelwe ngamapayipi namaphrofayili. Ngokwezibalo zolwazi lweLongzhong, ekusetshenzisweni okuphansi kwe-PVC ngo-2018, inani lamapayipi namaphrofayli kwakungu-27% no-24% ngokulandelana. Eminyakeni yakamuva, kepha kunemboni ezimbonini eziningi ezisezansi ze-PVC, okuyimboni yaphansi ye-PVC. Inani lesidingo esiphelele se-PVC nalo lenyukile lisuka ku-3% ngo-2014 laya ku-7% ngo-2020.
Njengamanje, ukusetshenziswa kwaminyaka yonke kwephansi le-PVC kungaphezu kwezigidi ezingama-300 m2, okuqhuba ukuthuthukiswa okusheshayo kwemboni yaphansi ye-PVC, futhi yakha izisekelo ezine zezimboni eBeijing, Zhangjiagang, eShanghai naseGuangzhou. Phakathi kwazo, iBeijing ikakhulukazi ingenisa imikhiqizo yamakhoyili, iZhangjiagang iyindawo enkulu kakhulu yomkhakha wephepha le-PVC neWPC eChina, kuyilapho iBeijing neShanghai zigxile emabhizinisini wohlobo lwe-PVC asekhaya nakwamanye amazwe ekhaya nakwamanye amazwe, nokukhishwa okuphelele kwalezi zinto ezine izifunda zenza ngaphezu kwama-90% womkhiqizo wasekhaya.
Isabelo semakethe yasekhaya siphansi, futhi kulindeleke ukuthi sithathe indawo yaphansi namalitha ahlanganisiwe ngokuzayo
Njengamanje, ngenxa yethonya lokwamukelwa ngumphakathi okuphansi, i-PVC flooring isetshenziswa kakhulu ezikoleni, ezibhedlela, ezitobhini zamabhasi nakwezinye izindawo zomphakathi, futhi ukusetshenziswa kwezindawo zokuhlala kuncane.
Uma kuqhathaniswa namazwe athuthukile, isikali semakethe saphansi se-PVC eChina sisezingeni eliphansi. Ngo-2017, ukufunwa kwe-China nge-PVC flooring kwaba ne-4.06% kuphela, futhi kusekhona indawo enkulu yokukhula. I-PVC flooring yaseChina isetshenziselwa kakhulu ukuhlobisa umphakathi, kuyilapho i-50% e-United States isetshenziselwa ukuhlobisa ikhaya. Ngokukhula kwemali engenayo kuzwelonke, ukusetshenziswa kwaphansi kwe-PVC kuzoba banzi kakhulu ngokuzayo. Kulindeleke ukuthi i-PVC flooring izongena esikhundleni se-laminate flooring kanye ne-composite flooring kakhulu eminyakeni emi-5 kuya ku-10 ezayo, ngaleyo ndlela kwandise kakhulu isabelo semakethe cishe ku-8% - 9%.
Ukuthunyelwa kwepansi le-PVC kukhula ngokushesha
Kusuka kumathani ayizigidi eziyi-1.39 ngo-2014 kuya kumathani ayizigidi ezingama-3.54 ngo-2018, ivolumu yokuthekelisa ye-PVC flooring eChina inyuke izikhathi eziyi-1.5 eminyakeni emihlanu edlule, ngezinga lokukhula lonyaka eliyi-27%. Izinga lokukhula kwaminyaka yonke lokuthunyelwa kwamanye amazwe lenyuke lisuka ku-US $ 1.972 billion laya ku-US $ 1.957 billion ngo-2014. Ngokuzayo, ngenqubekela phambili kanye nokuqhamuka kwezobuchwepheshe nobuchwepheshe bokukhiqiza kwamabhizinisi aphansi e-PVC PVC, isidingo saseChina sokuthekelisa impahla e-China sizophinde sikhuthazwe.
Phansi, PVC Carpet, I-Pet Sponge Flooring, PVC Sponge zaphansi, I-Pet Felt Esekela Ukusekelwa, Umugqa Wekhaphethi Waphansi,